त्रिचन्द्र प्रतीक्षा - कान्तिपुर समाचार
तिम्रो दाँत कीराले खाएको छ कि छैन ? यदि छैन भने, राम्रै भयो । श्वास गन्हाउनेलगायत अरू मुखसम्बन्धी रोगबाट बच्न हामी दाँत माझ्ने गर्छौँ । दिनहुँ दाँत सफा गर्नका लागि टुथ ब्रसले दाँत माझ्ने गर्दछौँ । तर हामीले प्रयोग गर्ने टुथ ब्रसको आविष्कार कसले गरेको थाहा छ ? त्यो एक जना जुत्ता सिलाउने व्यक्तिको अथक प्रयासले यो सम्भव भएको हो ।
दसैँको आगमनसँगै आकाशमा रङ्गीचङ्गी साना–ठूला चङ्गा उडिरहेका देखिन्छन् । एकछिन भए पनि आकाशमा उडेको चङ्गा हेर्दा कसलाई रमाइलो नलाग्ला ? बालक, युवा र वृद्धहरूसमेत चङ्गा उडाएर मनोरञ्जन लिने गर्छन् ।
त्रिचन्द्र प्रतीक्षाका लेखहरु :